စိတ်မရှိပါနဲ့ Careerbuilder! iFilm သည် Super Bowl ကြော်ငြာများကိုသယ်ဆောင်သည် Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2007 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2007 Douglas Karr
ကောင်းပါပြီ၊ သတင်းစာပိုင် Careerbuilder ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ်ထပ်မံမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပြုလုပ်ပါက iFilm သည်ရုပ်ရှင်ဖြန့်ဝေရန်အခွင့်အရေးရှိကြောင်းတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ Youtube မလုပ်ခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့် ၂၀၀၇ Super Bowl ၏ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးကြော်ငြာများမှာ -
စိတ်မရှိပါနဲ့ Careerbuilder! (အွန်လိုင်းပေါ်မှလူမှုရေးကွန်ယက်များမှတဆင့်သင်၏ကြော်ငြာများကိုအပြည့်အဝနှင့်အခမဲ့ဖြန့်ဝေသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်း)
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် Super Bowl ကြော်ငြာအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်၊
iFilm 2007 Super Bowl ကြော်ငြာ
ဟဲလို၊ ငါ Mac ပါ။ ထိုအခါငါက PC ပါပဲ။